Kedu ihe m nwere ike ime na ndepụta ngwaahịa m na Amazon.com maka ogo ọganihu?
Ọ bụrụ na ị nweta uru ego na-adịghị mma Amazon.com na nduzi ogo na-enwe ọganihu na-adịte aka, usoro nzuzo nke ihe ịga nke ọma na-ekpuchi n'ime nyocha ahịa ahịa dị ndụ. Achọpụtara m na ịnọ n'ihu egwuregwu ahụ na Amazon.com na ogo ka a hụrụ n'elu ọkwa ọkwa - ihe niile ị chọrọ bụ iji mezuo ndepụta ngwaahịa gị. Ma ugha bụ na ịnweta ihe niile na ebe ị kwesịrị ịmara ihe kpọmkwem na ebe a na-eme kpọmkwem oge ọ bụla ị na-ebute mgbanwe ọ bụla. Nke a bụ otu ị nwere ike isi mee nke a - jiri ntuziaka dị mkpirikpi dị na ya iji nwee nlezianya anya site na mmalite, na-egbughị ọbụna oge nke oge gị dị oké ọnụ ahịa ma ọ bụ mgbalị obere nchekwa - attrezzatura per stabilimenti balneari.
Nchịkọta nke kachasị mma na Amazon
Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu na Nchọpụta Nyocha Search (SEO), ị ga-enwerịrị ya - dị ka ọkachamara SEOs bụ ọkachamara na-ekwu na ọ bụ mgbe niile ka eze dị. Echere m na eleghị anya ihe ederede ọ bụla ị nwere ike ịchọta na Weebụ bụ kpọmkwem ihe na - eme ka nyochaa nke ọma maka mkpa dị mma ntanetị. Na ihe ọ bụla kachasị mma maka ntanetịime ọdịnaya site na iji amamihe mee ihe na ebe ntinye kwesịrị ekwesị nke isi okwu dị na isi. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ndepụta gị kachasị mma na Amazon.com na ogo gị nke a mụrụ site na ose ọlaọcha - iji nyochaa ntinye nyocha nke ọma kwesịrị ịbụ nọmba nzọụkwụ gị nke dị n'ebe ahụ.
Ya mere, ka anyị chee ya ihu - inwe nhọrọ nchịkọta nhọrọ dị mma dị oke mkpa iji mee ka ndepụta ngwaahịa gị dị na Amazon.com na-arụ ọrụ mgbe niile na n'elu nke chopper search. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nweta mkpirikpi nke ịmepụta ihe n'emeghị ka oge dị ukwuu, ana m akwado iji otu n'ime ihe nchọgharị ndị a: Google Planner (mmalite dị mma nke ọma na oge ochie na-abịa n'efu na atụmanya dị mma maka ụgwọ ọzọ ị ga-akwụ. - mkpọsa mkpọsa), yana okwu Merchant, AMZ Tracker, Ọrụ, na KeywordTool.io (dịtụ họrọ nke mbụ ịchọrọ kacha mma, dịka ngwá ọrụ ọ bụla akọwapụtara bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya ma gosipụta ya ).
Ọdịiche ọ bụla?
Gini mere i kwesiri iji bido nke oma na ihe ndi ozo choro site na ibu ndi choputara uwa, ma wepuzie ya, weputara gi ihe inyeaka? Nanị n'ihi na mgbe ọ bịara Amazon.com na ogo algorithm, e nwere n'ezie okwu abụọ dịgasị iche iche kwupụtara n'ebe ahụ - isiokwu ndị bụ isi na ndị zoro ezo.
Keywords Keywords - bu n'obi ka egosiputa ya na ihe di anya, dika ihe atu na utu aha, nkowa, isi okwu banyere ngwaahịa, wdg.
Keywords zoro ezo ụdị nke isiokwu dị ndụ na azụ nke ụlọ ahịa Amazon.Ọ bụ ezie na ha anaghị ahụ ya anya ma ọ bụ ndị na-ere ahịa n'ezie, na engines ọchụchọ, ihe nzuzo zoro ezo ka na-eme okwu ha ma nyere aka na ndepụta ngwaahịa gị nke ọma. nke ndị na-ere ahịa na mgbe ụfọdụ, ọbụna okwu ndị a na-atụghị anya ya, bụ nke a na-ejikarị mee ihe dị ka ụlọ ahịa ụlọ ọrụ - ya mere, a gaghị etinye ụdị edemede a dị ka ihe atụ, na utu aha.
Ndepụta ihe omuma na Amazon.com ruo D Rive Your Ranking
Ozugbo nnukwu ọdọ mmiri nke isiokwu ndị dị njikere, oge eruo iji nweta ihe niile dị na ntanetị ngwaahịa gị. Ma isi ihe di nkpa nke ederede ihe omuma nke anyi ga ebuli bu ihe ndi di mkpa. Na-eche na ha ga-ejupụta na isi lekwasịrị isiokwu - mbụ - nke a bụ ihe kwesịrị nlebara anya gị kpọmkwem n'ebe ahụ.
Ndepụta aha nke na-ekpuchi isiokwu bụ isi nke azụmahịa ahịa.
Ihe ntanetị na-enye nkọwa dị ọcha ma doo anya ma jiri ndụmọdụ.
Ahịa nkọwa nke n'ezie na-apụta maka nkọwa zuru ezu mbipute nke Bullet Points.
Ihe onyonyo ukwu na-akwado ngwaahịa ọ bụla iji nye ihe ngosi bara uru bara uru maka ndị na-ere ahịa ndụ.
Atụmatụ kachasị mma maka Amazon.com Ịnye Nkwalite
Ọ dịghị mkpa ịsị isiokwu nke nchịkọta ngwaahịa gị nwere ike ịbụ ebe kachasị mkpa n'ebe ahụ, nke ga-ejikarị ọtụtụ isiokwu dị ka o kwere mee. Ma, rịba ama, na ị gaghị enwerịrị ndepụta jam ngwaahịa gị-nke jupụtara na isiokwu. Ya mere, iji jide n'aka na aha aha gị bara uru, mee nlele abụọ iji nweta ihe niile dị na njirisi ndị a:
Tinye isi okwu ndị dị nso na nmalite n'ibelata iwu nke dị mkpa.
A na-ekwe ka ogologo aha ngwaahịa dịrị ruo ogo 200..N'ihi ya, ọ bụ naanị gị kpebiri ogologo oge ọ ga-abụ.
Akwụkwọ ozi ọ bụla nke okwu aha ọ bụla ga-abụrịrị ndị isi.
A ga-edepụta ọnụ ọgụgụ na nọmba (eg, 100 ga-adị mma, na otu narị - ma ọlị).
Ọ bụ ezie na data ọkọlọtọ na mbubata mbubata na-abịa site na ndabara, ụdị ngwaahịa ekwesịghị ịbụ ihe dị mkpa (n'ezie, ọ gwụla ma ọ bụ njirimara dị mkpa ma dị oké mkpa).
Ọ dị otu ihe ahụ bụ ịkọ ụcha - ọ dịghị mkpa ka edepụta ya maka ngwaahịa niile, naanị maka ihe ndị ahụ.
O nwere ike ịbụ na ị maara nke a, mana m ka ga-ede ndepụta dị mkpirikpi - ọ dịkarịa ala iji mezuo. Ya mere, ozugbo ị pịrị ntinye ngwaahịa ọ bụla n'ahịa ahịa a - ma ị na-abịa kpọmkwem na ibe weebụ yana ihe nkwụpụta. Dabere na Amazon.com nduzi nduzi, ṅaa ntị na ndụmọdụ ndị na-esonụ mgbe ị na-ahọrọ ihe nkwụnye okwu ga-adabara gị mma:
Ndepụta ihe nkwụpụta ga-ewuli elu data bara uru na ihe ọ bụla ọzọ.
Ihe ọmụma ndị ọzọ gbasara nkọwa gụnyere MUST bụrụ naanị ihe kacha mkpa.
Depụta atụmatụ ngwaahịa ndị bụ isi na uru dị mkpirikpi, dị ọcha ma dị nkenke.
Nkọwapụta Ngwaahịa & Foto
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile gbasara nkọwa ngwaahịa na nyochacha ọdịyo bụ nkọwa n'onwe gị. Ọ bụ ya mere na m ga - egosi gị nchịkọta nkenke nke nchọpụta kachasị agbanwe na MUST-nwere isi ihe na-emesi ike:
Nkọwapụta Ngwaahịa - nke bara ụba na isiokwu, ọ pụtara bụrụ ihe pụrụ iche. Na-ekwu maka isi ihe mgbu nke ndị ahịa, nkọwa nkọwa zuru oke kwesịrị ikpuchi nchịkọta data niile edepụtara kpamkpam ma zuru ezu.
Ngwaahịa Ngwaahịa - Nanị njedebe bụ na Amazon na-ekwe ka ngwaahịa ọ bụla depụtara na-enweghị ihe karịrị itoolu foto ọzọ. Eleghị anya ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, mana m ka na-atụle ịtụle karịsịa nkwakọ ngwaahịa, ibi ndụ nakwa dịka ị na-eji ngwaahịa gbaa agba - iji mee ya.